VR Thrills: Roller Coaster 360 (Google Cardboard) 2.0.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.0.5 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား သြင္တူျပဳျခင္း VR Thrills: Roller Coaster 360 (Google Cardboard)
VR Thrills: Roller Coaster 360 (Google Cardboard) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဆုံးစွန် VR ကြိတ်စက် Coaster အတွေ့အကြုံကို။ အသစ်နှင့်အသစ်မွမ်းမံဗားရှင်း: လူကြိုက်အများဆုံး VR ဂိမ်း များထဲမှယခု features အသစ် 3D သံမဏိပြေးသမား, စိတ်ကူးယဉ် & ဂြိုလ်သားဂီတစီးစီး, အသစ်က သူဌေးကြီး Mode ကိုအတွက် rollercoater ကျော်လွန် Go!
Samsung ရဲ့ Galaxy S8 မှာ (+) အသုံးပြုသူများအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံအတွက် WQHD + resolution ကိုဖွင့်ဖို့သေချာအောင်ပေးပါ။ ကို Setting> Display ကို> မျက်နှာပြင် resolution ကို> WQHD + > ကိုကျင့်သုံးပါ
ဒီဂိမ်းမျိုးစုံ Virtual Reality (VR) ကြိတ်စက် Coaster စီးပါရှိပါတယ်။ သငျသညျအဆုံးစွန်ဆွဲဆောင်မှု / ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံနေ VR app ကိုတဦးတည်းအဝေးကို click install လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ VR အတွက် rollercoaster လမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်ထိတွေ့ mode ကို (Non-VR) ကျော်ထိမခိုက်။ အခမဲ့ download လုပ်ပါ။
အဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်ငါတို့သည်သင်တို့ဖုံးလွှမ်းတယ်။ သင်သည်မည်သည့် gyroscope အာရုံခံကိရိယာမပါဘဲကိရိယာရှိပါက ဘယ်ဖက်သို့မဟုတ်မြင်ကွင်းကိုလှည့်ရန်ညာဘက်သင်၏ခေါင်းကိုစောင်းပေးပါ။ သင်က VR rollercoaster မထိန်းချုပ်ဘူး, သင်မူကားကာလအတွင်း 360 ဒီဂရီကြည့်ရှုရန်စီးနိုင်ပါတယ်။
သင်သည်များစွာသောခံစားနိုင်ပါလျှင်အဘယ်ကြောင့်တဦးတည်းကြိတ်စက် Coaster အဘို့အနည်ထိုင်? သင့်ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင် roller Coaster ပန်းခြံအားဖြင့်လွှဲနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံ၏သူဌေးကြီးဖြစ်ခြင်းနှင့်သင်ကတူခံစားအစဉ်အဆက်လာသောအခါသင့်ကိုယ်ပိုင် roller coaster စီးနင်းရသလိုခံစားမှုကောက်နေကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်!
အဆိုပါစီးလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကွဲပြားခြားနားသောအရသာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားအဆင့်အတွက်လာ။ တစ်ဦးထက်ပိုဂန္အာရဇ်ပင်ကြိတ်စက် Coaster ထုတ်ဝေ Pick သို့မဟုတ်အမြန်ဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်အရူးစီးနင်းယူနှငျ့သငျ queasy ရလိမ့်မယ်အဘယျသို့ပွိုင့်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိ။
ကျနော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားသော 360 ကိုမှန်ကန် rollercoaster စီး၏ဗီဒီယိုများနှင့် NEW သင့်ရဲ့မေးရိုး drop လုပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကမ်ဘာပျေါတှငျအံ့သြဖွယ်အပြန်အလှန် 3D roller coaster စီးနင်းရသလိုခံစားမှုနှစ်ခုလုံးကိုပူဇော်!
အဆိုပါ 360 ကဗီဒီယိုစီးမဆို Simulator ကိုရနိုင်သကဲ့သို့အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒီတစ်ကြိတ်စက် Coaster ခြင်း simulation အောင်အစစ်အမှန်ဘဝရိုက်ကူးမှလာကြ၏။ ဒါကြောင့်ဒီအခမဲ့ VR ဂိမ်းယခုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးသင်တစ်ဦးလှည့်ဖျားဘို့တစ်ကြိတ်စက် Coaster တာနဲ့တူခံစားမိအစဉ်အဆက်လာသောအခါ, သင်၏အိတ်ကပ်ထဲမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆွဲဆောင်မှုပန်းခြံရှိသည်။ အပြည့်အဝ 360 VR အတွက်ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းမှာလမ်းကြောင်းချ roller Coaster ပြိုင်ကားခံစားရသည်။
2018 ခုနှစ်တွင်နယူးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်အသစ် 3D VR roller coaster စီးနင်းရသလိုခံစားမှုကိုချိုးဖောက်နေတဲ့မြေပြင်။ အဆိုပါအားလုံးအသစ်ကဂြိုလ်သား Music ကိုစီးနင်သင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နှင့်ဂီတ visualizes တစ်ခုအပန်းဖြေနှင့်မြင့်မားနှစ်ဦးစလုံးရဲ့အမြန်နှုန်းစီးတတ်၏။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းအစာရှောင်ခြင်းပေးစေလိုပါတယ်နှေးကွေးကဏ္ဍများရှိပြီးပတ်ဝန်းကျင်သို့ရောစပ်ကဂြိုလ်သားကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာ drive ကိုများအတွက် wingsuite ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာနဲ့တူခံစားမိစေသည်။ ဂီတကသင်၏သင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့စီးနင်းဂီတနှင့်အတူ aligned start ထို့နောက် en ပေါ့ပ်, R & B, ဒါမှမဟုတ် Dance အပါအဝင်အမျိုးအစားကောက်လို့ရပါတယ်အတိုင်းဤချစ်ရမယ့်စကားပြော။ စီးယင်း tile ကိုထိပ်ထောင့်မှာ 3D ဖျောပွထားရှိရာကဗီဒီယိုဖျောပွထားရှိရာစီးအွန်လိုင်းမှအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု (wifi အကြံပြုသည်) လိုအပ်သောအွန်လိုင်းဗီဒီယိုမှတဆင့်ထုတ်လွှင့်ကြလိမ့်မည်အဖြစ်စီးနင်း, စစ်မှန်သော 3d အတွေ့အကြုံကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်သတိပြုပါ။
အဆိုပါ VR app ကို Android မှာမိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် Google Cardboard ၏အသုံးပြုမှုကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားပါတယ်။ ကျနော်တို့စျေးပေါနဲ့ high-end devices များပံ့ပိုးပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာသင်၏နားကြပ်ပေါ်စီးနင်းပြသကိစ္စများရှိပါကသင်သည်မှန်ကန်စွာသင့်ရဲ့ device ကိုများအတွက် Cardboard setting ကို enabled လျှင်ပထမဦးစွာစစ်ဆေးပါ။ သငျသညျအများအားဖြင့်အလိုအလျှောက်သင်၏နားကြပ်များအတွက် setting ကို enable တစ် QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူသိများလိုက်ဖက်တဲ့ပါဝင်သည်: VRTX တစ်ခုမှာ, Stooksy, VR KiX, Durovis ထိုးဆင်း, VR, Refugio 3D, ANTVR, VR Smartview, ColorCross, VRTRIA, FIBRUM VR, VR ကြည့်ရန်-Master, Nibiru ပေါင်းမည်။ သင်သည်မည်သည့်ကိစ္စများရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
အထို့ပြင်သင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာထိထိန်းချုပ်မှုမှတဆင့်ဆို VR နားကြပ်မပါဘဲစီးခံစားရန်ဒီ app ကိုသုံးနိုင်သည်။ သည်
သငျသညျ VR apps များနှင့်ဂိမ်းများနဲ့တူခဲ့လျှင်နှင့်အထူးသ VR ကြိတ်စက် Coaster စီးစိတျလှုပျရှားဖှယျထို့နောက်ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အကို download လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ 5, 4, 3, 2, 1 ... အ VR groove သို့ Get နှင့်ယခုသင့်အခမဲ့ VR ကြိတ်စက် Coaster တောင်းဆို!
သင့်ရဲ့ AR / VR Discovery အပေါ်ပိုပြီး Find နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကို join:
- ကျွန်တော်တို့ကိုလိုပဲ Facebook ကို အပေါ်
- ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုများ YouTube ကို View
- တွစ်တာ အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ
© 2017-2018 ယုန်တောင် Entertainment က, Ltd. All rights reserved ။
VR Thrills: Roller Coaster 360 (Google Cardboard) အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
VR Thrills: Roller Coaster 360 (Google Cardboard) အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
VR Thrills: Roller Coaster 360 (Google Cardboard) အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
VR Thrills: Roller Coaster 360 (Google Cardboard) အား အခ်က္ျပပါ
nicostorepn စတိုး 1 2.78k
VR Thrills: Roller Coaster 360 (Google Cardboard) ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း VR Thrills: Roller Coaster 360 (Google Cardboard) အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Rabbit Mountain
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.rabbitmountain.com/privacy-policy/
လက်မှတ် SHA1: A1:0B:1B:FB:67:DB:13:6F:C0:59:47:59:FD:D8:74:FD:40:74:B1:FF
အဖွဲ့အစည်း (O): Rabbit Mountain
နယ်မြေ (L): Varna
နိုင်ငံ (C): BG
VR Thrills: Roller Coaster 360 (Google Cardboard) APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ